ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၄) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေးဝ်ကြီးဌာန၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန မှ ၁၉၇၂ခုနှစ် တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော (ပုံစံရေးသွင်းရ်ညွှ်ကြားချက် ) စာအုပ်စာ မျက် နှာ ( ၄၃ ) ပူးတွဲ (က) လူမျိုးများ စာရင်းခေါင်းစဉ် အောက်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ ( ၁၄၄ ) မျိုး နှင့် နိုင်ငံခြား သားလူမျိုး ( ၂၆ ) မျိုး ဟုဖေါ်ပြထားသည်။
သို့သော် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဥပါတီဗဟိုဌာနချုပ်က ၁၉၇၆ ခှုစ၊ဇန္နဝါရီ လ ၊ ပထမ အကြိမ် ထုတ်ဝေသော တိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ ( ရခိုင် ) စာအုပ်တွင်ဒိုင်းနက် ကိုတိုင်းရင်း သား မျိုး နွယ် စုအဖြစ်ထည့်သွင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
← ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၃)
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၅) →